Istaadiyaami abbaa kutaa ciisichaa Kuwaatar tapha Waancaa Addunyaa 2022 – Fana Broadcasting Corporate
Istaadiyaami abbaa kutaa ciisichaa Kuwaatar tapha Waancaa Addunyaa 2022
Finfinnee, Fulbaana 7, 2012 (FBC) – Qopheessituun tapha Waancaa Adduyaa bara Faranjoota 2022 taphatamuuf Kuwaatar qophiitti jirti.
Qophii taasisaa jirtu keessaa ijaarsi istaadiyaamii isa tokkodha.
Istaadiyaamonni baayyeen ijaarsi isaanii gara xumuraatti dhiyaachuudhaan walqabatee, wantoonni ijaarsa istaadiyaamota kana irratti hidhamaanii jiran waan haaraa fi waan hin amaleeffatamne ta’uun himamaa jira.
Kanneen keessaa Wiixata dabarsinne viidiyoowwaan miidiyaalee hawaasaa irratti gadi dhiifamaan istaadiyaamiin Al Bayaat jedhamu kan mul’isu yoo ta’u, viidiyiichi istaadiyaamicha keessaatti bakka kutaa ciisichaa qabatanii tapha kubbaa ilaaluun danda’amu akka jiru kan agarsiisudha.
Kutaaleen ciisicha kunneen sadarkaa kutaa ciisichaa hooteelaan kan ijaaramaan yoo ta’u, fuulleedhaan kan haguugamanii fi achi keessa ta’anii kubbaa ilaalaluun kan danda’amu ta’uu ibsameera.
Istaadiyaamichi kutaalee ciisichaa cinaatti bakkee paarkii bashananaa fi lagaa namtolchee kan qabu ta’uu himameera.
Ijaarsi istaadiyaamii Al Bayaat guutumaatti yeroo xumuramu daawwattoota kuma 60 qabachuu kan danda’u ta’uu himameera.
Kuwaatar tapha waancaa adduyaaf bara Faranjootaa 2022 istaadiyaamota 8 qopheessaa kan jirtu yoo ta’u, kanneen keessa istaadiyaamonni 7 guutumaatti ijaarsa haaraa irratti kan argamanidha.
Istaadiyaamiin 8ffaa ammo istaadiyaamii intarnaashinaala Kaliif yoo ta’u, guutumaatti haaromsi taasifameefi bara darbe ji’a Caamsaa banaa ta’uun isaa ni yaadatama.